I-Argentina ihlule i-New Zealand | Scrolla Izindaba
I-Argentina ihlule i-New Zealand
Umhlaba webhola lombhoxo uzamazamile ngoMgqibelo ngesikhathi i-Argentina ihlula i-New Zealand ngo 25-15 ukuqopha ukunqoba kwabo kokuqala bedlala ne-All Blacks.
Bekungenye yezinkinga ezinkulu emlandweni wombhoxo.
I-Argentina isidlale ne-New Zealand amahlandla angama-30 ngaphambi kweminyaka engaphezu kwengama-35 – futhi ibishaywa njalo.
La maqembu womabili abedlala emqhudelwaneni we-Tri-Nations ovuselelwe wukuthi ompetha bomhlaba iNingizimu Afrika bahlezi ngaphandle kulo nyaka ngenxa yalolu bhubhane.
Onke amaphuzu angama-25 ePumas atholwe yi-flyhalf yeqembu uNicolás Sánchez nge-try, amaphenalthi ayisithupha nokwengezelwa amagoli amabili uma eshaywe nge-try.
I-Argentina ayinikwanga nhlobo ithuba lokuwina umdlalo wabo ngemuva kokubekelwa eceleni yinkinga yezempilo yomhlaba.
“Lokhu kubaluleke kakhulu kithina,” kusho umqeqeshi wabo, uMario Ledesma. “Sizokukhumbula lokhu isikhathi eside… Ngicabanga ukuthi kukhona umuntu ozobhala incwadi ngakho.”